Global Voices teny Malagasy » Tontolon’ny Bilaogy Kiswahili · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Novambra 2018 13:52 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Tanzania, Mediam-bahoaka
Niverina aho. Ireto ny feo avy ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Kiswahili:
- Ampifandraisin'i i Mawazo na Mawaidha  (rohy maty) aminà tantara iray momba ireo mpijirika solosaina ao Korea Avaratra mitovy fahaizana amin'ny CIA isika, izay tetikasa iray hamarana ny “fahajambàna amin'ny solosaina”. Eo ihany koa ny lahatsoratra iray momba ny fampidiram-bola amin'ny alàlan'ireo tetikasa rindrambaiko maimaimpoana sy manana loharano misokatra.
- Manoratra mombanà Nizeriana iray mpanao gazety izay mikaroka ireo Afrikana mpifindra monina any Aostralia, manadihady azy ireo ary manoratra ny tantarany  anatin'ny bilaoginy i Mwandani .
- Manoratra momba ny fampaherezana ny vehivavy i Damija . Heveriny fa ny fanomezan-danja ny tena sy ny fahalalàna ny tena no fitaovana fototra amin'ny fampaherezana ny vehivavy.
- Manoro hevitra ny taranaka mpiangaly Hip Hop ao Tanzania mba handinika tsara izay halainy tahaka avy amin'ireo mpanakanto eo amin'ny sehatry ny Hip Hop Amerikana i Martha ary koa hieritreritra izay fomba hifandraisan'ireo zavatra ireo amin'ny sehatry ny kolontsaina Tanzaniana.
- Mamoaka dika Kiswahili an'ilay Teny Ierana Global Voices  (pejy voafafa) i Jikomboe . Bilaogera Anglisy  roa avy ao Tanzania ihany koa no nampahafantarina.
- Kiriko amin'ny Mpanjaka Mswati III ao Soazilandy izay nampiakatra ny vadiny fahafolo ny volana lasa teo i Pilikapilika .
- Miandry ny fametrahana ny lalàna vaovao mandrara ny fifohana sigara anatin'ny faritra ho an'ny daholobe ao Tanzania i Reginald .
- Manoratra momba ny fanokanana/fanararaotana ny firaisana ara-nofo ho an'ny fahafinaretana fotsiny ihany raha tokony homen-danja ho fombafomba masina sy hetsika fanompoana i Bakanja , moanina Afrikanina. Mifototra amin'ny finoana Afrikanina nentin-drazana ny tohankeviny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/12/129426/
 ny tantarany: http://africanrefugees.blogspot.com/
 Teny Ierana Global Voices: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/?page_id=79
 Bilaogera Anglisy: http://jikomboe.blogspot.com/2005/06/blogu-mpya-ya-kiingereza-toka-tanzania.html